Bugharịa ihe ngosi Chakwasa ihie n'ebe ọ bụla na ihuenyo | Esi m mac
Bugharịa ihe ngosi Chakwasa ihie n'ebe ọ bụla na ihuenyo
Otu n'ime ihe m na-enwekarị ekele maka maka sistemụ arụmọrụ Mac bụ nnukwu ikike nhazi yana ọ dị mfe ịnweta ozi site na ụzọ dị iche iche. Otu ọrụ m kacha eji bụ Akara. Na nsụgharị ndị ọhụrụ, ọ bụghị naanị na-enyocha faịlụ ma ọ bụ aha ndị mmadụ na burukwa, kamakwa ụfọdụ ozi ekele maka mmekọrịta na ngwa ndị ọzọ.
Ya mere, anyị nwere ike ịrịọ gị ka ịkọwapụta otu okwu, rụọ ọrụ mgbakọ na mwepụ ma ọ bụ nsonaazụ nke otu egwuregwu ma ọ bụ oge kachasị amasị anyị.
N'oge a ị ga - ama otu esi emeghe Chakwasa ihie na Mac anyị. Wayzọ kachasịsịsịsịsịsịsị bụ bụ ịpị oghere (cmd) +. Ngwa a pere mpe ga - emepe ozugbo n’ebe izizi ya: ebe di elu nke ihuenyo anyi.
Ugbu a, bugharịa ya na akụkụ ihuenyo nke anyị chere na ọ kacha mma. Omume a dị mfe dịka pịa na Chakwasa ihie ma dọrọ ya gaa ebe achọrọ ma dobe. Ọ bụrụ na anyị enweghị afọ ojuju na ntinye anyị, anyị nwere ike ịmeghachi ihe a ọtụtụ oge ka anyị chere na ọ dị mma. Dị ka ọ bụ mmanya na-agbatị ala na mgbe ụfọdụ n'aka nri, ana m akwado ịme ule ole na ole iji chọpụta na ihe niile dị anyị mma.
Mac anyị ga - echeta ọnọdụ anyị chọtara Chakwasa ihie ọ ga-emekwa ya n'otu ebe ahụ oge ọ bụla anyị kpọrọ ya. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na anyị nwere ike ịhapụ ya n'ọnọdụ mbụ, anyị ga-pịa bọtịnụ Chakwasa ihie nke dị na aka nri aka nri. Ihe nnọchianya ya bụ iko dị ebube. Anyi aghaghi idobe ya rue mgbe edeturu ogwe ihe ngosi na onodu mbu.
Egbu, ọ dịghị mkpa ka kwalite ka MacOS Sierra na-enwe a mma. N'ezie anyị nwere ike ịnụ ụtọ ọrụ a site na Mac OS X Captain.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Bugharịa ihe ngosi Chakwasa ihie n'ebe ọ bụla na ihuenyo
Njikọ ahụ agaghị !!, biko gbanwee ya !!
Zaghachi David Hupa
David Bunnell, onye guzobere Macworld, nwụrụ
Apple weputara beta nke anọ nke tvOS 10.0.1